News | पेट्रोल
News | Tag: पेट्रोल
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको साविक खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर दुई रुपैँया घटाएको छ । आन्तरिक उडानमा प्रयोग गरिने हवाई इन्धनमा भने निगमले प्रतिलिटर चार रुपैँया ५० पैसा घटाएको छ । पेट्रयोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार आज रातिदेखि लागू हुने गरी उक्त मूल्य घटाइएको जनाइएको छ ।
फ्रीमा पेट्रोल भरिदिन इन्कार गर्दा दाहिने खुट्टा काट्नुप–यो !
हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको गाजियाबादमा एक कार चालकले पेट्रोल पम्पका एक कर्मचारीमाथि गाडी चढाएको छ, जसको कारण ती कर्मचारीले आफ्नो खुट्टा काट्नुप–यो । कविनगर थाना इलाकाको महलौरीस्थित एक पेट्रोल पम्पका कर्मचारीले फ्रीमा पेट्रोल हालिदिन इन्कार गरेपछि कार चालकले उही कर्मचारीमाथि कार चढाएका हुन् ।
मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दा इरानमा दर्जनौँ मारिएपछि राष्ट्रसङ्घद्वारा चासो व्यक्त
﻿जेनेभा । पेट्रोलको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा दर्जनौँ इरानी मारिएको समाचारप्रति मङ्गलबार राष्ट्रसङ्घले गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ । पेट्रोलको मूल्यवृद्धिविरूद्ध इरानमा शनिबारदेखि प्रदर्शनहरू हुँदै आएका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । विरोधका क्रममा दर्जनौँ व्यक्तिको मृत्यु भएको र एक हजार प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।
इरानमा इन्धनको मूल्यवृद्धिको विरोध
बाँके । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा एउटा पनि व्यवस्थित पेट्रोलपम्प छैन । तर, यहाँका घरैपिच्छे पेट्रोल खरीद बिक्री हुन्छ । घरघरै जर्किनमा पेट्रोल राख्ने प्रचलन रहिआएको छ । यसले कारोवार र आम्दानी त राम्रै भएको छ । तर, यहाँका प्रत्येक घर असुरक्षित बन्दै गइरहेका छन् । भर्खरै सडक विस्तार भएपछि यातायातका साधन बाक्लिँदै गएको नरैनापुर अहिले पनि बाँकेका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा दुर्गम मानिदै आएको छ ।
असारभित्र पाइपमार्फत नेपालमा पेट्रोल भित्रिने !
काठमाडौं । सम्भवतः मुलुकमा यसै महिनाको अन्त्यदेखि पाइप लाइनबाट पेट्रोल भित्रिने भएको छ । निर्माणाधीन मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेपछि यस्तो सम्भावना देखिएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थ– यस कारण प्रतिलिटर १५/२० रुपैयाँ बढी तिर्छन् उपभोक्ता
काठमाडौं । कालीकोट मस्तमाण्डु पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिरहेका हस्तबहादुर बमले नेपालगन्जबाट पेट्रोलियम पदार्थ लगेर बिक्री गर्छन् ।
काठमाडौं । २०७६ जेठ तीन गते राति १२ः०० बजेबाट लागू हुनेगरी नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको साविकको खुद्रा मूल्य समायोजन गरेको छ ।
काठमाडौँ । आयल निगमले चर्को नाफामा मात्र ध्यान दिँदा नेपाली उपभोक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको कच्चा तेलको भाउबाट लाभ लिन सकेका छैनन् ।